admin – Brightex Paints
Language - |
Nitrocellulose Putty Grey 22
Solvent-based Wood Grain Filler
Easy Bleach 202
Acid Catalysed Sealer & Lacquer
Polyurethane Sealer & Lacquer
Melamine Coating 185
Polyurethane No. 60
Everlux High Gloss Finish
Gloss Finish 31
Gold Paint 58
Cold Galvanize Compound 908
Lacquer Wood Stain (Aerosol spray type)
Home\_ Easy Bleach 202
Easy bleach 202 သည် အချောသတ်ရန်နှင့် အစွန်းအထင်းများအတွက် သစ်သားအရောင်ကို တပြေးညီရရှိစေရန်နှင့် သစ်သားအရောင် ဖျော့စေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Polyurethane coatings သည် အပူဒဏ်၊ အစွန်းအထင်း၊ ခြစ်မိခြင်းများကို အကောင်းဆုံး ခုခံနိုင်ပြီး ကြာရှည်ခံသည့် သုတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အခြောက်မြန်၊ အရောင်ကြည်လင်၊ ပြောင်လက်ပြီး အချောသတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Acid catalysed coatings သည် သစ်သားထည်ပစ္စည်းများကို ဓါတုပစ္စည်းများ ထိတွေဒဏ်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ကြာရှည်ခံနိုင်သော acid catalyst အသုံးပြုထားသည့် အပေါ်ဆေး ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးသားပြောင်လက်ပြီး အချောသတ်လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံပြုနိုင်ပါသည်။
Nitrocellulose coating သည် အခြောက်မြန်ခြင်း၊ အသုံးပြုရ လွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများသော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ သစ်သားအရောင်များကို လှပအောင် ပြုလုပ်ရလွယ်ကူစေပြီး သစ်သား၏ သဘာဝအရောင်အတိုင်းပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။ သစ်အချောထည်စက်ရုံများတွင် အများဆုံး အသုံးပြုကြပါသည်။
သံချေးမတက်အောင် ကာကွယ်ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးသားထူသည့် zinc အခြေခံသော အပေါ်ဆေး ဖြစ်ပါသည်။
Hammertone Finish သည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များအား လှပသော ငါးကြင်းကွက်ပုံသဏ္ဍန်များ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည့် အခြောက်မြန်သော သုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
Vinyl Butyral Resin ကို အခြေခံထားသည့် ဆွဲကပ်အားကောင်းမွန်သော wash primer သံခံဆေး ဖြစ်ပါသည်။
Patina Finish သည် သံကြွပ်၊ စတီး၊ အမျိုးမျိုးသော သတ္တုမျက်နှာပြင်များ၊အတွက် ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အသွင်အပြင်ကဲ့သို့ ကြေးညှိများလို ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ရွှေရောင်သုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကိုယ်ပိုင် အနုပညာ ဖန်တီးမှုများအတွက် ဆေးခြောက်ရန်ကြာချိန် အနည်းငယ် များနိုင်ပါသည်။
Gold Paint 58 သည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော Acrylic အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားသော ရွှေရောင်သုတ်ဆေး ဖြစ်ပါသည်။
Know what's happening and the latest trends on social media!
Be the first to know about the latest news and promotions!
Copyright © 2018 Brightex Paints (S) Pte Lt d. All rights reserved. Powered by UtoMedia